တရားရုံးချုပ်သည်တက္ကဆက်ပြည်နယ်တိုင်ကြားချက်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်သောကြောင့် Trump ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေခြင်း - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
တရားရုံးချုပ်ကတက္ကဆက်တိုင်ကြားချက်ကိုပယ်ဖျက်လိုက်သည်နှင့်အမျှ Trump အားအကြီးအကျယ်ထိုးနှက်ခြင်း
ဒီဇင်ဘာလတွင် 12, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 12, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန် ဒီမိုကရက်ပါတီ, Donald Trump, အသားပေးသတင်းများ, အရင်ဖျော်ဖြေ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကမ္ဘာ, သတင်းဆောင်းပါး, မြောက်အမေရိက, နိုင်ငံရေး, ရီပတ်ဘလီကန်
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြည်နယ် ၁၇ ခုသည်စစ်မြေပြင်ပြည်နယ် ၄ ခုအားတက္ကဆက်ပြည်နယ်တရားစွဲဆိုမှုနှင့်တရားရုံးချုပ်သို့တင်ပြခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲတွင်ရှုံးနိမ့်ခြင်းမရှိသော်လည်းအကြီးအကျယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုဟုစွပ်စွဲခံထားရသည့် Trump သည်တက္ကဆက်ပြည်နယ်တရားရုံးအားတရားရုံးချုပ်ကထောက်ခံမှုပေးရန်အဆိုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။
သောကြာနေ့တွင် Barrett၊ Gorsuch နှင့် Kavanaugh တို့ကသမ္မတနှင့်လက်တွဲခဲ့ခြင်းမရှိပါ။
သောကြာနေ့ကအမေရိကန်သမ္မတ Donald Trump အကြီးအကျယ်ထိုးနှက်ခံခဲ့ရသည် မကြာသေးမီကကောက်ယူခဲ့သောအမေရိကန်ရွေးကောက်ပွဲသည်တိုင်းပြည်အပြီးလိမ်လည်မှုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန်သူ၏စိတ်အားထက်သန်မှု တရားရုံးချုပ်ကတရားစွဲဆိုမှုကိုပယ်ချခဲ့သည် ဂျိုးဘိုင်ဒန်၏အောင်မြင်မှုကိုမှောက်လှန်ရန်တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှတင်သွင်းခဲ့သည် ရပ်တည်မှုကင်းမဲ့နေသည်.
တက္ကဆက် AG ကကဲန် Paxton
တိုင်ကြားမှုကိုတက္ကဆက်ရှေ့နေချုပ်ကတင်သွင်းခဲ့သည်။ ကဲန်ပါစတန်တစ် ဦး ရင်းနှီးသော Trump မဟာမိတ်။ ပြည်နယ်ခုနစ်ဆ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကတရားရုံးချုပ်နှင့်အတူအကျဉ်းတင်သွင်းခဲ့သည် တက္ကဆက်ပြည်နယ်တရားစွဲဆိုမှု လေးစစ်မြေပြင်ဆန့်ကျင်။
"တရားရုံးချုပ်အနေဖြင့်အမေရိကန်မဲဆန္ဒရှင်သန်းနှင့်ချီသောသူများ၏ဆန္ဒကိုပယ်ဖျက်ရန်အတွက်အစွန်းရောက်၊ ဥပဒေနှင့်မကိုက်ညီသည့်၊ ဒီမိုကရေစီမဆန်သော GOP တရားစွဲဆိုမှုအားလက်ထဲမှပယ်ချလိုက်သည်" ဟုဥက္ကaker္ဌနန်စီပါလိုစီကသောကြာနေ့ညကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
Paxton မှရလဒ်များကိုပယ်ဖျက်ရန်တရားရုံးချုပ်အားတောင်းဆိုခဲ့သည် ဂျော်ဂျီယာ၊ မစ်ရှီဂန်၊ သူကဆိုပါတယ် သူတို့၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကဤကပ်ရောဂါကို“ အကြောင်းပြချက်” အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှလိုအပ်သောဥပဒေပြုရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြင်ပရှိစည်းမျဉ်းများကိုပြောင်းလဲရန်။
ပြည်နယ် ၄ ခုသည်ရွေးကောက်ပွဲကောလိပ်တွင်စုစုပေါင်း ၆၂ မဲရရှိထားရာတရားရုံးချုပ်သည်ပက်စတန်၏ထောက်ခံမှုဖြင့်စီရင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါက Trump သည် ၂၃၂ ရွေးကောက်ပွဲကောလိပ်မဲ ၂၃၂ မဲနှင့်ဘီဒင် ၃၀၆ တွင် ၂၇၀ အထက်ရရှိသောကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲ၏ရလဒ်မှာပြောင်းလဲသွားနိုင်သည် အိမ်ဖြူတော်ကိုတက်ဖို့အတားအဆီးရှိတယ်။
ဝန်ခံမထားသူ Trump ရွေးကောက်ပွဲတွင်ရှုံးနိမ့်သော်လည်းအကြီးအကျယ်စွပ်စွဲကြသည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုသည်တက္ကဆက်ပြည်နယ်၏အမှုကိုတရားရုံးချုပ်သို့တင်သွင်းရန်အဆိုပြုခဲ့သည်။
သောကြာနေ့တွင်အမေရိကန်သမ္မတကတရားရုံးသည်သူ၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုစီရင်လိမ့်မည်ဟုတရားရုံးချုပ်မတင်ခင်တွစ်တာတွင်ဤသို့ရေးသားခဲ့သည် -“ အကယ်၍ တရားရုံးချုပ်သည်ဉာဏ်ပညာနှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိကိုပြသခဲ့လျှင်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်သမိုင်းတွင်အရေးအကြီးဆုံးအမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်သည် ထပ်၍ လေးစားပါ ဦး ။ ” သူ Tweet လုပ်ခဲ့.
ကြာသပတေးနေ့တွင်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်မှရီပတ်ဘလီကန်လွှတ်တော်အမတ် ၁၀၆ ဦး ကထောက်ခံခဲ့ကြသည် တက္ကဆက်ပြည်နယ်တရားစွဲဆိုမှု ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့် ဥပဒေရေးရာထောက်ခံမှု၏အကျဉ်း အမှု၌ ("amicus curiae") ။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ကိုလံဘီယာခရိုင်မှ ဦး ဆောင်သည့်အစိုးရရှေ့နေများ ၂၃ ဦး ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ကအလားတူပြုမူခဲ့သော်လည်းတောင်းဆိုမှုကိုပယ်ချရန်တရားရုံးချုပ်အားတောင်းဆိုခဲ့သည်။
သောကြာနေ့ရဲ့ထိုးနှက် Trump ယခုအထိသူ၏ရှာပုံတော်အတွက်ခံစားခဲ့ရဖူးသောပထမ ဦး ဆုံးမဟုတ်ပါ။ အင်္ဂါနေ့တွင်တရားရုံးကသမ္မတ၏မဟာမိတ်များကတရားစွဲဆိုမှုကိုပယ်ချခဲ့သည် Pennsylvania ၌ Biden ၏အောင်ပွဲကိုပြောင်းပြန်လုပ်ရန်။
ဆုံးဖြတ်ချက်များအားဖြင့်သွား, တရားရုံးသမ္မတသူဖြစ်ကောင်းအပေါ်ဘဏ်လုပ်ငန်းခဲ့ဘယ်သူကိုအလွန်တရားရုံးတွင်အများအပြားခန့်အပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, Trump အပေါ်၎င်း၏နောက်သို့လှည့်ခဲ့သည်။ Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh နှင့် Amy Coney Barrett တို့မှ Trump သည်သူ၏သက်တမ်းအတွင်းတရားသူကြီးသုံး ဦး ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
Trump သည်ပြီးခဲ့သည့်စက်တင်ဘာလကုန်တွင် Barrett ကိုအမည်စာရင်းတင်သွင်းခဲ့ပြီးအထက်လွှတ်တော်တွင်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီအတည်ပြုခဲ့သည်။
သို့သော် Barrett, မ Gorsuch, ဒါမှမဟုတ် Kavanaugh မ သောကြာနေ့တွင်နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အတူလိုက်ပါ။
ပြည်နယ် ၁၇ ခုပူးပေါင်းခဲ့သည် အများပိုင်သတင်း Donald ဂျေ Trump ဂျိုးဘိုင်ဒန် နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ် Texas